samedi, 15 avril 2017 15:49
Fianarantsoa : Fifaninanana ara-barotra voarindra
Ankoatran’ny mpamokatra divay, dia orinasa mpanamboatra zava-pisotro miisa dimy no afaka milaza fa mpifaninana eto Fianarantsoa amin’izao fotoana izao. Eo ny Sodiam, Star, Comadis, 303 ary ny Compagnie Vidzar.
Nanokatra masoivoho ahitana ny voakatra 100 mahery ity farany ny tolakandron’ny zoma 14 aprily lasa teo ka manetsika ny tsena aty an-toerana ny fisian’izany foto-drafitrasa izany. Io no voalohany manerana ny Nosy ho an’io orinasa io.
Amin’ny ankapobeny dia mampiroborobo ny fifaninanana ara-barotra izany paikady izany, ankoatra izay dia manova ny fomba fiasa sy fiodin’ny tsenan’ny zava-pisotro eto Fianarantsoa ny vokatra ateraky ny fisokafan’io toerana io.
samedi, 15 avril 2017 15:20
Korea Avaratra: Mampiseho vangy
Efa ho herinandro izao ny Filoha amerikanina Donald Trump no efa nandrahona an'ny Korea Avaratra mba tsy hamokatra sy hanao fanandramana fiadiana nokleary.
samedi, 15 avril 2017 14:19
Majunga en fête : Mampiavaka azy ny “Festival des fruits de mer”
Nanomboka omaly harivan'ny zoma ny “festival” ary andiany faharoa izy izao tafiditra anatin'ny hetsika "Majunga en fête".
Fanomezan-danja ny vokatra an-dranomasina amin'ny alalan' ny varotra fampiratiana ataon'ireo hotely lehibe eto Mahajanga ny tena antom-pisian'ity festival ity. Fanehoana ireo vokatra an-dranomasina amin'ny fomba fahandro sy fikarakarana samihafa.
Tanjona ny hisintonana vahiny sy mpizahatany ary mpitsangatsangana maro ato anatin'ny faritra Boeny amin'ny alalan' ny vokatra an-dranomasina mampiavaka sy mampalaza azy.
Fahombiazana raha ny andro voalohany omaly izay mbola hitohy androany. Voasarika avokoa na teratany Malagasy na vahiny.
samedi, 15 avril 2017 14:07
Jeux du Melaky : Antsalova accueillera la 29ème édition
Les dates des 29e jeux de Melaky ne sont pas encore définies. Kasay Louis est à la tête du comité d’organisation de l’édition 2017 des “Jeux du Melaky”.
On apprend que la société Madaoil accorde 30 millions d’Ariary pour l’organisation.
samedi, 15 avril 2017 13:54
WAKE UP MADA: Maneho ny heviny momba ny raharaha Claudine
Naneho ny tsy fankasitrahany ihany koa ny WAKE UP MADA izay nitondra sora-baventy teny anoloan'ny lapan'ny fitsarana. Mila ny fiverenan'i Ramatoa Claudine RAZAIMAMOJY ary mila ny mangarahara tanteraka.
samedi, 15 avril 2017 13:25
Raharaha Claudine: Mitaky ny ampodiana azy ny SSM
Namory ny mpanao gazety teny amin’ny fitsarana tampony Anosy ny teo anivon’ny SSM na ny Plate-forme Solidarité Syndicale de Madagascar, manoloana ny tsy fanajana ny lalàna eto Madagasikara.
Nijoro moa ity fivondronan'ny Sendika, izay ahitana ireo mpitsara, ireo mpiandry fonja ary ireo sendika maro.
Mitaky izy ireo ny ampodiana an'i Claudine Razaimamonjy, mitaky ny anenjehana ireo rehetra nitsikombakomba nampandositra azy, mitaky ny SSM ny henenjehana ny tompon'antoka tamin'ny fitaritana olona hikomy sy nanimba fananam-panjakana teny amin'ny Bianco.
Tsy manaiky ny teritery atao amin'ny mpitsara ity Plate-forme ity, ary manohana ny ezaka ataon'ny SMM sy ny Bianco.